Ilite Classic Sweetener – SUNNY eSTORE
Ilite Classic Sweetener
APY DistributionSKU: 8885015011027
iLite အမှတ်တံဆိပ် iLite Finest (Classic Sweetener) သည် သကြားအစားထိုး အကောင်းဆုံး sweetener တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ Stevia Rebaundiana ဟုခေါ်သော အပင်တစ်မျိုးမှ ထုတ်ယူထား သဘာဝအတိုင်း အချိုဓာတ်ကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ကယ်လိုရီလုံးဝ (0%) မရှိပါ။
iLIte Finest(Classic Sweetener) can be used as Stevia in drinks. It is the best replacement for sugar and has 0% Calories. Stevia, which is extracted from the lead of the Stevia Rebaundiana plant gives its natural sweetness